Eyona ndlela iphambili yeeWomens tracksuit Velor Long Sleeve Sweatsuit Zip Up Hoodie Manufacturer kunye neFektri | Lebang
Isinxibo seWomens Velor Sleeve Sweatsuit Zip Up Hoodie
Sifumene ilaphu elinye elihlala likhangeleka lilungile kunye nobusika. Ewe, sithetha ngevelvet. Eli laphu lithambileyo kwaye liyakhazimla kwangoko lenza nantoni na enxibe i-luxe ngakumbi kunye nokulungela iholide, kodwa ikwangumboniso ofanelekileyo ukuya phezulu ngaphezulu kwayo nayiphi na imbonakalo ngexesha leenyanga zasebusika ezibandayo. iminyaka, i-desgin ilula, kukho ilogo ethile elula esifubeni sasekhohlo, okanye akukho nto konke konke, abathengi abaninzi bathenga ibhatyi yevelvet kuphela ngenxa yokuba ilaphu levelvet, lanele.
Nokuba unxibe ibhatyi yevelvet ngaphezulu kwengubo okanye ngeqhosha-phantsi kunye nejean, ithembisa ukufumana ukuncoma kwangoko. Sithembe-ibhatyi yakho oyithandayo iya kujongeka ngcono izihlandlo ezili-10 xa yenziwe ngevelvet. Oku kuyinyani, yiyo loo nto uninzi lwamanenekazi athanda ezemidlalo, athenga iibhatyi zebhulukhwe kunye neebhulukhwe ukuzilolonga, njengokubaleka, ukubaleka ekuseni.
Ke ukuba ujonge ukutshintshela umdlalo webhatyi yakho kodwa usafuna enye ngaphakathi kwintuthuzelo yendlela yakho yesiqhelo, sicebisa ukuba uqwalasele ezi zitayile zebhatyi zikhangeleka ngcono kwi-velvet. Lumka: Kunzima ukukhetha enye. Kukho umbala weklasikhi webhatyi yevelvet, njengombala omnyama, umbala ongwevu ongwevu, umbala wepinki, kunye neminye imibala onokuyikhetha kwiwebhusayithi yethu.
Izinto eziphathekayo:I-80% yomqhaphu / i-20polyester, umqhaphu, okanye njengezicelo zakho
1.More ngaphezu 100KGS: Ngu elwandle okanye emoyeni
2.Less ngaphezu 100KGS: Ngu express, umnyango nomnyango inkonzo
3.Ngokutsho kwesicelo somthengi.
Egqithileyo UMyili wamadoda, iiHoodies eziPrintiweyo kunye neeYilo
Okulandelayo: Amadoda aThengisa kakhulu kwiPolo yehempe
Ihowuliseyili amadoda fashion pullover hoodies cu ...
Ihowuliseyili amadoda fashion plain pullover hoodies MH003